EVY's Kitchen: August 2010
Posted by Evy at 9:11 PM5comments:
Posted by Evy at 6:07 PM 1 comment:
Posted by Evy at 8:20 PM 17 comments:
ခရမ်းသီးအမဲသားနှပ် (Sauteed Beef with Eggplant and Red Chili)
ဟင်းအသစ်လေးတမျိုးပါ။ ချက်ရတာလည်း လွယ်ပြီး အရမ်းအရသာရှိပါတယ်။ စမ်းကြည့်ကြပါနော်။
အမဲသားအကြေသားကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်နဲ့ နယ်ထား၊
ကြက်သွန်နီ အသေးတစ်ဥ နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၃ မွှာ၊ ဂျင်းလက်တဆစ်လောက်ကို ကြိတ်ထား။
ဆီ စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်းလောက်ကို အရင်သတ်၊ ဆီပူရင် ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ဂျင်းထည့်ပြီး နွမ်းအောင် ခဏတည်ထားပါ။ ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီးထည့် ပြီး ကြေအောင်မွှေပေးပပါ။၊ ခဏကြာရင် အမဲသား၊ ခရမ်းသီးထည့်၊ ငရုပ်သီးထည့်၊ ပဲငံပျာရည်တစ်ဇွန်းထည့် ပြီး ခဏတည်ထားပါ (ကြားထဲမှာ မကြာမကြာမွှေပေးပါ) ဆီပြန်ရင် ရပါပြီ။
Posted by Evy at 3:04 PM No comments:
Posted by Evy at 8:37 PM3comments:
Posted by Evy at 9:33 PM 1 comment:
Posted by Evy at 4:31 PM6comments:
Posted by Evy at 10:30 PM5comments:
-All purpose flour 60g
-Baking powder 1g
-Milk powder 4g
-Margarine 18g (melted)
-2 drops of red coloring
၁) ထောပတ်ကို အရည်ပျော်အောင်အပူပေးထားပါ။
၂) ရေနဲ့ နို့မှုန့်ကို ရောဖျော်ထားပါ။
၃) Flour/ Baking powder ကိုဇကာချထားပါ။
၄)ကြက်ဥ နဲ့ သကြားကို ribbon like stage ဖြစ်တဲ့ အထိစက်နဲ့မွှေပါ
၅) နို့နဲ့ flour mixture (၄) ထည့်ပေးပါ၊ သမအောင် ဖြေးဖြေးမွှေပါ။ အရမ်းမွှေလို့မရပါ။
၆) နံပါတ် ၅ ရဲ့ တ၀က်ကို နံပါတ် (၁)ထဲထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပေးပါ။ ပြီးမှကျန်တာကို ဆက်ထည့်ပြီးမွှေပါ။
၇) ရလာတဲ့ မုန့်နှစ်ကို မုန့်ဖုတ်ခွက်ထဲထည့် ၊ ၁၇၀ ဒီဂရီ oven မှာ ၂၅ မိနစ်ကြာအောင်ဖုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် အအေးခံပါ။
၈) အအေးခံပြီးရင် ခလယ်ကနေရေပြင်ညီအတိုင်းလှီးပြီး မုန့်ဗန်းထဲမှာပထမအလွှာကို ခင်းထားလိုက်ပါ။
Custard layer ကို ပြင်ပါမယ်
-Bandung Juice 450 ml, Butter 30g၊ Sugar 60g ကို ဆူအောင်တည်ပါ။ ဆူရင်မီးကို အနည်းဆုံးမှာထားလိုက်ပါ။
-Bandung Juice 250ml/ Kwe powder 60g/ Corn flour 15g ကိုရောမွှေပြီး ခုနကဆူအောင်တည်ထားတဲ့ Bandung juice ထဲကိုထည့်ပြီး အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။ ပျစ်တဲ့အနေအထားရောက်ပြီဆိုရင် ချလို့ရပါပြီ
ခုနကပြင်ထားတဲ့မုန့်အလွှာပေါ်မှာ Bandung Custard အနှစ်ကိုလောင်းလိုက်ပါ။ပြီးရင်နောက်မုန့်တ
စ်လွှာထပ်တင်။ Bandung Custard အနှစ်ကိုထပ်တင်။ အအေးခံပြီးရင်ကြိုက်ရာပုံလှီးပြီးစားနိုင်ပါပြီ။
Posted by Evy at 3:04 PM2comments:
အမဲသားလုံး ဆီပြန် ( Beef balls with Chilli and Tomato)
အိမ်မှာ အမဲသားချက်ခဲပါတယ်။ အနံ့ မသတ်နိုင်တာရယ် ချက်ရတာ ကြာတာရယ်နဲ့ တော်တော်ကြာမှ တစ်ခါချက်ဖြစ်တာပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။ နူးနူးညံ့ညံ့ နဲ့ အရသာအတော်ရှိပါတယ် (ဒါယောင်းမလက်ရာပါ၊ ကိုယ်ကတော့ဘေးကနေ လေ့လာသူပေါ့ :D )။ နောက်ဆိုရင်တော့ ခဏခဏချက်ဖြစ်မလားပဲ။
အမဲသားကြိတ်သား ( ၂၀၀ ဂရမ်) ကို ကြက်ဥတစ်လုံး၊ဆား လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း၊ ပြောင်းဖူးမှုန့် လက်ဘက်ရည် ဇွန်း ၂ဇွန်း။ ဂျင်း ၊ကြက်သွန်ဖြူ ကြိတ်ပြီးသား စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်း နဲ့သမအောင်ရောနယ်ပါတယ်။ ပြီးရင် အလုံးသေးသေးလေးတွေလုံးထားလိုက်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ဂျင်းကို ဆီသတ်ပါမယ်။ နွမ်းလာရင် ငရုပ်သီးအရောင်တင် စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး အရွယ်တော်တစ်လုံး (ပါးပါးလေးတွေလှီးထား) နဲ့ ခုနကအမဲသားလုံးလေးတွေထည့်၊ ငံပျာရည်ထည့်၊ အပေါ့အငံမြည်း ပြီး ဆီပြန်ရင်စားလို့ရပါပြီ။
These delicious home made beef balls were prepared by my SIL for our lunch yesterday. Though we used frozen minced meat, it is still yummy. It will be the best if you can use "the fresh" meat. You must try it out .Highly recommended :-D.
200g of minced meat (beef,for my case)
a table spoon of ginger and minced garlic
Mix all the ingredients and transform them into small balls. Set it aside.
Now we are going to prepare the sauce/gravy to go with the balls.
Heat up the oil in the frying pan. Add in ginger and garlic first followed by chopped onions. Leave it for about3mins. Add in chilli powder/fish sauce and stir it well. Lastly, add in tomato and beef balls together. Add inalittle bit of water and cook until the oil start to float (Stir in between). It is now ready to serve. Enjoy!
Posted by Evy at 10:45 AM5comments: